Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elihle ngaphakathi kuphuhliso lwabucala. - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elihle ngaphakathi kuphuhliso lwabucala.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguGabyta
Yonwabela iflethi okanye indlu ekwicomplex ethe cwaka, ecocekileyo nekhuselekileyo, elungele intsapho yakho okanye uhambo lwezoshishino, inendawo yokusebenzela, i-intanethi eyi-60 Mb, sinebhedi eyisofa ukuba xa ufika nabantwana okanye abantu abatsha, unokuba neveranda engaphambili ukuze wonwabele ukutya okumnandi phandle, ufunde okanye ube neglasi yewayini nje, sinobubele kakhulu ibe siza kukuthanda ukukwamkela
Ungasebenzisa i-patio, unekhitshi kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex, kukho iitafile egadini okanye ngaphakathi eflethini, sineMagisTV, i-app ekuvumela ukuba ubukele uthotho lweemuvi ezikhoyo ngoku. Kulo phuhliso kukho ibala lokudlala, ivenkile yokutya, inkundla, iindawo eziluhlaza kunye nendawo yokupaka esimahla.
Indlu yethu ikwindawo ephucukileyo, ebizwa ngokuba nguEloy Alfaro, phambi kweSibhedlele i-Esperanza, kukho iindawo eziyi-5 ukusuka kwivenkile enkulu yaseAki eAv. Las Palmeras
Umbuki zindwendwe ngu- Gabyta
Siya kukuvuyela ukuphendula izinto ezikuxhalabisayo, ukuba uthanda imoto okanye sikuse kwenye indawo singakwazi nokuyilungisa, siyazi amacandelo aliqela esixeko sethu kwaye sinokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi. Sikulungele ukusombulula naziphi na iingxaki njengoko iflethi isecaleni kwendlu yethu. Siye sahamba izihlandlo ezininzi kwi-Airbnb ngoko siye senza amacebiso okukwenza uzive usekhaya.
Siya kukuvuyela ukuphendula izinto ezikuxhalabisayo, ukuba uthanda imoto okanye sikuse kwenye indawo singakwazi nokuyilungisa, siyazi amacandelo aliqela esixeko sethu kwaye sinokwe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Machala